Sethula incwadi yethu eyengeziwe yaseJalimane yebanga lesi-9, ibanga le-10 kanye nabafundi bezikole eziphakeme ngokujwayelekile. Ungasebenzisa incwadi yethu yesiJalimane, esiyilungiselele njenge-E-Book, kwikhompyutha yakho noma kwiselula yakho.
Incwadi yethu yokufunda yaseJalimane ayisiyo incwadi yokwengeza kuphela yabafundi besikole samabanga aphezulu, kodwa futhi iyincwadi yokufunda yaseJalimane yabaqalayo yokufunda isiJalimane.
Incwadi yethu yesiJalimane ebizwa ngeWir lernen Deutsch (WLD) ingasetshenziswa njengencwadi eyengeziwe yaseJalimane yabafundi bebanga lesi-9, ingasetshenziswa futhi njengencwadi yokufunda yaseJalimane yabafundi bebanga le-10 ngoba ibandakanya nezifundo zebanga le-10. Ingasetshenziswa njengomthombo osizayo futhi ofundisayo wabafundi bebanga le-11 nele-12 abanesizinda esingesihle saseJalimane.
Ngaphandle kwabafundi besikole samabanga aphakeme, labo abangafundi kunoma yisiphi isikole noma kunoma iyiphi inkambo yaseJalimane bangasebenzisa kalula incwadi yethu yokufunda yaseJalimane ukuze bafunde isiJalimane bebodwa. Incwadi yethu ilungiselelwe nabantu abangakhulumi noma yiluphi ulimi lwesiJalimane futhi izifundo zaseJalimane ziqala ekuqaleni. Ngakho-ke, labo abaqala ukufunda isiJalimane noma labo abangazi noma yisiphi isiJalimane bazokwazi ukufunda kalula isiJalimane encwadini yethu.
IZIHLOKO ENCWADINI YASEGERMAN INCWADI
# IZIHLOKO ENCWADINI YASEGERMAN INCWADI
Qaphela: Sihlala sizama ukukunikeza ulwazi lwakamuva. Lesi sihloko osifundayo sabhalwa okokuqala cishe ezinyangeni eziyi-12 ezedlule, ngomhla ka-09 Disemba 2020, futhi lesi sihloko sagcina ukubuyekezwa ngomhla ka-14 kuZibandlela 2020.
Umncintiswano Wolwazi WaseJalimane Owenzelwe eSivas
Isicelo se-German Sample Smart Board
Tags: 10. ibhuku lezincwadi zesiJalimane, 10. izifundo zesiGerman, 10. inkulumo yesi-German yesifundo, Ibanga lesi-10 incwadi yesiJalimane